प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि अधिकार भनेको के हो? रूपान्तरण गर्ने प्रतिलिपि कसरी लेख्ने Martech Zone
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि अधिकार भनेको के हो? रूपान्तरण गर्ने प्रतिलिपि कसरी लेख्ने
बिहीबार, सेप्टेम्बर 6, 2018 बुधबार, सेप्टेम्बर 5, 2018 Douglas Karr
औसत लेख मात्र प्रदर्शन गर्न गइरहेको छैन। म खोजी र सामाजिक मार्फत रूचिका शीर्षकहरू जाँच्दा म हैरान हुन जारी राख्छु तर जब म लेख पढ्न थाल्छु, यो केवल बोरिंग र जानकारीहीन छ। यदि तपाइँले उही सटीक प्रस्तावको साथ दुई ल्यान्डि pages पृष्ठहरू निर्माण गर्नुभयो भने, म ग्यारेन्टी दिन्छु कि एक प्रतिभाशाली प्रतिलिपि लेखकले लेखेकाले अझ बढी ध्यान प्राप्त गर्नेछ। एक पक्ष नोट मा, म अझै पनि एक महान लेखक बन्न चाहान्छु। म १० बर्षदेखि लेख्दै छु र सिक्न जारी राख्छु।
कोप्पेल डायरेक्टको भर्खरको इन्फोग्राफिक, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि अधिकार: क्राफ्टि Copy प्रतिलिपि जुन रूपान्तरण गर्दछ, ती प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया copywriting गोप्य केहि व्यापक संसार संग साझा। कुनै समय बिना नै एक किलर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया (DR) प्रयास कसरी शिफ्ट गर्ने सिक्नुहोस्, वा कम्तिमा कम्तिमा तपाइँको मनपर्ने copywriters आफ्नो जादू औंलाहरु प्रयोग कसरी महान् ग्राहकहरु मा तपाइँको नेतृत्व मालिश गर्न को लागी।
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि के हो?
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया एक वाक्यांश हो जुन एक प्रतिलिपि अधिकार वा विज्ञापन रणनीतिमा निर्दिष्ट हुन्छ जहाँ तपाईं निरपेक्ष कार्य लिनुभयो। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग वा विज्ञापनको सँधै कार्यको लागि कल हुन्छ जुन द्रुत, मापन परिणाम हो। उदाहरण एक अवतरण पृष्ठ हुनेछ जहाँ एक फारम भरिएको छ वा क्लिक कल कल कल परिणामहरू बिक्री कलमा। ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सँधै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि प्रयोग गर्दछ।
पिटर कोप्पेलले तपाईंलाई सुरू गर्न copy प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि अधिकार सल्लाहहरू:
तपाईंको प्रतिलिपिको लागि लक्ष्यहरू निर्धारित गर्नुहोस्। के तपाईं जुत्ता बेच्दै हुनुहुन्छ वा कसैलाई कारणको लागि चन्दा दिन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईंको मार्ग योजना गर्नुहोस्। तपाईं कसरी त्यो लक्ष्य हासिल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? यो समय सृजनात्मक संक्षिप्तको लागि हो!
तपाइँको मान प्रदर्शन गर्न तयार गर्नुहोस्। सँधै देखाउनुहोस्, कहिले पनि नभन्न, तपाईले तालिकामा कति मान ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईं सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्न लाग्नुभएको तरिकाहरूको सूची बनाउनुहोस् यदि लक्षितले तपाईंले सोधेको कुरा गर्छ भने।
पोइन्टहरू मिलाउनुहोस् तपाईको सूचीमा क्रमशः तपाईको प्रारम्भिक लक्ष्यको लागि सबैभन्दा मूल्यवानबाट।
यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्। कम से कम प्रभावी हुने विन्दुबाट छुटकारा पाउनुहोस्।
इन्फोग्राफिक विवरण तपाईंको प्रत्येक सीधा प्रतिक्रिया प्रतिलिपि योजना, लेख्न, र अनुकूलन एक समग्र प्रक्रिया मा प्रत्येक चरण। यसले प्रत्येक माध्यमका लागि अप्टिमाइजेसन गर्ने विवरण गर्दछ, कार्यलाई कल मात्र गर्दैन। पीटरले कसरी केही उदाहरणहरू प्रदान गर्दछ कसरी मौखिक परिवर्तनले पाठकलाई प्रभाव पार्न सक्छ:
"अवसर"बरु" जीवनमा एक पटक। " के यो वास्तवमै जीवनकालमा एक पटक हो? हुनसक्दैन। यदि यो हो भने, तपाईं किन कसैलाई बेच्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा जानुहोस्!
"पत्ता लगाउनुहोस्"को ठाउँमा" पहिले कहिल्यै देखेको छैन। " तपाईं केहि बेच्दै हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईंले यसलाई देख्नुभयो, कम्तिमा वास्तविक जीवनमा कोहीले पनि खिचेको तस्वीरमा।
"विशेष"Over" Hurry! " यद्यपि समय एक प्रेरक हुन सक्छ, यो एक यति प्रयोग गरिएको छ कि यसले वस्तुतः पावर बोक्दैन। केही मिनेटमा म्याद समाप्त हुने प्रस्तावहरू पनि जाँदैनन्।
यहाँ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपि अधिकार: क्राफ्टि Copy प्रतिलिपि जुन रूपान्तरण गर्दछ:
टैग: प्रतिलिपि लेखनcopywriting सूत्रcopywriting सुझावहरूctaप्रत्यक्ष प्रतिलिपिप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अभियानप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रतिलिपिकसरीइंफोग्राफ़कkoeppel प्रत्यक्षपीटर कोपेपलके होसीधा प्रतिक्रिया के होशब्दहरुलेखन सुझावहरू